Gloxinia - ट्यूबलर फूल संग आकर्षक इन्डोर प्लान्ट। यसलाई मनैदेखि मात्र खाली पट पछि छोडेर को मृत्यु को शीर्ष रंगीन inflorescences को एक पूरी गुच्छा संग कवर गर्मी, मा blooms, तर हिउँदमा। कहिल्यै सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो र आफ्नो मालिक सबै वर्ष दौर प्रसन्न हुनेछ भनेर एक फूल सिर्जना गर्नुहोस्, तपाईं beading प्रविधी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै योजनाहरू gloxinia मनका छन्। टेरी कली को निर्माण को विचार गर्नुहोस्।
एक फूल मोती जस्तै, गुलाबी सेतो र हरियो रूपमा तीन रंग, आवश्यक हुनेछ सिर्जना गर्न। कली तीन आन्तरिक र बाह्य4पत्रदल हुन्छन्। अलग stamens बनाउन आवश्यक छ। हरियो मोती को बाह्यदलें र पत्ते कार्यान्वयन। बाह्यदलें र पत्रदल लागि मोटाइ मा 0.3 मिमी को आन्तरिक तार आवश्यक छ। काम आन्तरिक पत्रदल सिर्जना साथ सुरु हुन्छ।
को चुच्चो भाग प्रकार 18 मोती मा, माथि धेरै मोती रूपमा आवश्यक टिप्ने, दुवै पक्षले4चाप को बनाउन। यसलाई टाइप गर्न सजिलो थियो सामाग्री गर्न, obliquely तार अन्त कटौती।
पाँचौ चाप सेता edging छ। यो सम्भव5सेतो मोती प्राप्त बनाउन र एक फूलको दल किनारा भन्दा यो प्रक्रिया दोहरो, अघिल्लो चाप को मोती4मार्फत तार को अन्त मुद्दा।
तार को अन्त्य सुरक्षित, तिनीहरूलाई कस।
2 थप पत्रदल गर्नुहोस्।
बाहिरी पत्रदल र stamens कसरी बुनाई गर्न
अब बाहिरी पत्रदल gloxinia मनका zaymomsya। कम्तिमा 0.4 मिमी - तिनीहरूलाई लागि तार भित्री भाग भन्दा मोटा हुन। एउटै व्यास पत्ते लागि आवश्यक छ।
काम भित्री पत्रदल संग मामला मा जस्तै तरिकामा सुरु हुन्छ:
प्रति एक्सल 18 मोती डायल र बनाउन4चाप र त्यसपछि मोती शीर्ष मा 13 भन्दा कम मोती को अघिल्लो चाप लागि यो सम्झना गर्न त तार राख्न। यसरी ल्वाड़ गठन। तार तय गर्न आवश्यक छ।
त्यसपछि मोती टाइप र तार को फूलको दल तल्लो अन्त मा यसलाई सुरक्षित, ड्रप डाउन।
निम्न चाप एक मनका तार अघिल्लो चरण भन्दा सम्झना आउँछ। फेरि मोती र सुरक्षित को उनको दायाँ मात्रा मा तल तार र टाइप कम। एक पल्ट दोहोर्याउनुहोस्। संग दाँत तीन पङ्क्तिहरू काम गर्नुपर्छ।
यस्तै मा अन्य पक्ष lobe मा एक ल्वाड़ सिर्जना गर्नुहोस्।
अन्तिम चरण मा सेतो मोती संग edging बनाउन छ। यसलाई तल बाट मोती को एक दशौं सुरु र आन्तरिक पत्रदल लागि जस्तै तरिकामा बाहिर छ।
3 थप पत्रदल गर्नुहोस्।
Stamens सुई विधि अनुगामी। यो गर्न, 30 त्यसपछि मोती पास, तार मोती 40 डायल, र हरेक 10 खुट्टा3मा लूपहरूको गठन, विपरीत दिशा मा तार सूत्र। Stamens3टुक्रा आवश्यक छ।
gloxinia लागि बाह्यदलें र पत्ते
gloxinia मनका सिर्जना गर्ने बिरूवा को हरियो भाग zaymomsya को अर्को चरण मा। बाह्यदलें लागि एक्सल 12 हरियो मोती टाइप र दुवै पक्षले3Arcs, र त्यसपछि तार सुरक्षित।5टुक्रा बनाउन।
आवश्यक तार सिर्जना गर्न 0.4 मिमी मोटी छोड्छ।
को डायल 25 मोती को केन्द्रीय अक्ष र3दुवै पक्षले Arcs बनाउन।
चौथो चाप दाँत गठन गर्ने सुरु गर्नुहोस्। यो गर्न, अघिल्लो पङ्क्ति को नवौं तार मनका मार्फत छोड्न र यो तल गिर, को श्रृंखला समाप्त गर्न मोती को इच्छित नम्बर डायल।
त्यसपछि फेरि, मोती टाइप र तार 8 मोती अघिल्लो चाप भन्दा कम छ मुद्दा। फेरि दोहोरिन, एउटै प्रविधी पानामा को विपरीत पक्ष पालना गर्नुहोस्।
3-4 पात लिनुहोस्।
मोती को Gloxinia विधानसभा
बाक्लो तार आवश्यक हुनेछ फूल इकट्ठा गर्न। बाहिर भित्र पत्रदल - पहिलो, stamens, र त्यसपछि ठीक। फूल अन्यथा तिनीहरू तोड्न हुनेछ, राम्ररी समाधान किनभने प्रत्येक अन्य भाग, एक गम्भीर पाए। थप बन्धन लागि, तपाईं पात तार को किनाराको सिलाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि टेप खैरो वा हरियो प्रयोग गरेर पुष्प कली तिनीहरूलाई संलग्न, प्रत्येक अन्य बाह्यदलें थप्नुहोस्। कम से कम पात संलग्न गर्नुहोस्।
एक फूल र पात को एक पर्याप्त संख्या तीन बनाउन, तपाईं मोती को डिजाइन gloxinia गर्न र एक पट वा फूलदान अपारदर्शी मा गर्न सक्नुहुन्छ। उत्पादन समाधान गर्न प्लास्टर वा जिप्सम, खट्टा क्रीम को स्थिरता गर्न पतला छ जो आवश्यक हुनेछ। यो मिश्रण मोटा हुन्छ सम्म ध्यान दिएर, ट्यांक मा खन्याइन् र एक सानो अब प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छ।
त्यसपछि एक मोटी तार, फूल संलग्न छ जो, छोटो छन्, र पात र तन्तु प्रत्येक अन्य नजिक एक पट मा राखिएको थियो। मिश्रण पूर्ण कठोर, यो खैरो रंग मा चित्रित गर्न सकिन्छ माथि वा कृत्रिम मश सजाउनु। सामान्यतया कारण माटो को व्यापक पात गर्न बिरुवाहरु देखिने छैनन्, तर फूल greenery को पृष्ठभूमिमा थप प्राकृतिक हेर्न हुनेछ।
ड्राइभिङ gloxinia बुनाई मोती पनि शुरुआती लागि एकदम सरल र बुझ्ने छ। फूल एक वेब देखि कम वा सिलाई पत्रदल प्रयोग गरेर अर्को तरिकामा संकलित गर्न सकिन्छ। पात पनि विभिन्न embodiments संयोजन र असामान्य संरचना सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ एउटा फरक प्रविधी मा प्रदर्शन गर्दै छन्।
कसरी "lego" बाट सुरक्षित बनाउने? निर्देशन
सजिलो बुनाई - जापानी चप्पल
ठूलो portraitists। पोर्ट्रेट चित्रकार
किन शुक्राणु को सपना? हामी सिक्न!
Monastic आदेश। मध्य युग को Monastic आदेश
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा सबैभन्दा लामो सडक के हो?